Duco loogu talagalay dadka kale, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Baybalku wuxuu si cad uga hadlayaa ducada in ka badan 400 oo meelood. Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira kuwa kaloo badan oo si aan toos ahayn ula macaamilaya isaga. La yaab ma laha in Masiixiyiintu jecel yihiin inay eraygan u adeegsadaan noloshooda Ilaah. Salaaddayada waxaan Ilaahay ka baryeynaa inuu barakeeyo carruurteenna, ayeeyadeen, labada isqaba, waalidiinta, ehelka, asxaabta, wada-shaqeynta iyo dad kale oo fara badan. Kaararka salaanta waxaan ku qoreynaa "Ilaah ha ku barakeeyo" waxaanna u adeegsanaa weedho sida "Habakkuk maalin barakaysan". Ma jiro erey ka fiican oo lagu sharxo wanaagga Eebbe ee annaga, waxaanan rajaynaynaa inaan maalin kasta uga mahadnaqno barakada uu barakeeyey. Waxaan u maleynayaa inay sidoo kale muhiim tahay in dadka loo duco.
Markii Ilaah ka codsaday Ibraahim inuu dalkiisa ka tago, wuxuu u sheegay wuxuu sameyn lahaa: "Waxaan rabaa inaan adiga kaa dhigo dad aad u wanaagsan waxaanan doonayaa inaan kuu duceeyo oo aan kuu yeelo magac weyn, oo waxaad noqon doontaa duco" (Bilowgii 1: 12,1-2). Daabacaadda Kitaabka Quduuska ah ee New Life wuxuu leeyahay: "Waxaan rabaa inaan kaaga dhigo kuwa kale barakada". Aad ayaan uga walaacsanahay marinkan waxaanan inta badan isweydiiyaa: "Ma umadaa umada kale?"
Waan ognahay in wax bixinta la bixiyo ay ka farxad badan tahay qaadashada (Falimaha Rasuullada 20,35). Waxaan sidoo kale ognahay inay tahay inaan la wadaagno barakeysan dadka kale. Waxaan aaminsanahay inay jiraan waxbadan oo loo duceeyo dadka kale. Barakada ayaa si weyn wax ugu kordhisa farxad iyo wanaag ama hadiyad samada ka timaada. Dadku miyay dareemaan inay fiicnaanayaan ama xitaa ay ku barakeeyeen joogitaankayaga? Mise waxaad jeceshahay inaad la joogto qof kale oo si weyn kalsooni ugu leh nolosha?
Masiixiyiin ahaan, waa inaan nahay iftiinka adduunka (Matayos 5,14: 16). Shaqadeena maahan inaan xallino dhibaatooyinka adduunka, laakiin waa inaan u iftiimino sidii iftiinka mugdiga ah. Ma ogeyd in iftiinka uu si dhaqso leh uga dhaqaaqaayo codkarka? Ma qaabkeenna maanta inoo iftiiminaya adduunka kuwa aan la kulanno? Tani miyay noo keenaysaa duco kuwa kale?
U duceynta kuwa kale kuma xirna wax kasto oo si qumman ugu socda nolosheena. Markay Paul iyo Silas ku jireen xabsi, waxay go’aansadeen inaysan habaarin xaaladooda. Oo waxay siiyeen inay Ilaah ammaanaan. Tusaalaheeda wuxuu u ahaa duco maxaabiista kale iyo ilaalada xabsiga (Falimaha Rasuullada 16,25: 31). Mararka qaarkood ficiladeena ayaa faa'iido u leh dadka kale waqtiyada adag xitaa annaguna kama ogaan doonno iyaga. Haddii aan isku dheelitirno Ilaah, wuxuu ku sameyn karaa waxyaabo mucjiso ah annaga oo aan annaga xitaa ogeyn.
Kumaa ogaan kara inta qof ee uu la xiriiri doono? Waxaa la sheegay in hal qof uu saameyn ku yeelan karo illaa 10.000 oo qof inta uu nool yahay. Miyayna ahayn wax la yaab leh haddii aan u noqon lahayn wax u duceeya qof kasta oo ka mid ah dadkaan, dhib yar haba yaraatee? Waa suurta gal. Waxaan u baahanahay oo keliya inaan weydiisanno: "Sayidow, fadlan ii yeel kuwa barakaysan kuwa kale!"
Talo soo jeedin dhamaadka. Dunidu meel fiican ayey ku noolaan doontaa haddaan hirgalinno xukunkii John Wesley ee nolosha:
Samee intii aad awoodid
adigoo adeegsanaya dariiq kasta oo aad gacantaada ku jirto
si kasta oo suurto gal ah
markasta iyo meeshaad rabto
dhanka dadka oo dhan iyo
illaa iyo inta suurtagal ah.